Umphakathi waseMelville ubhikishe wavala umgwaqo | News24
Umphakathi waseMelville ubhikishe wavala umgwaqo
UMPHAKATHI waseMelville uvimbe umgwaqo u-R102 ngenkathi ubhikisha ngoMsombuluko ekuseni.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Major Shooz Magudulela uthe ababhikishi bashise amathaya bawasebenzisa ukuvimba umgwaqo u-R102.
Umphakathi ubungaqali ukubhikisha njengoba ngoLwesithathu oledlule bekuyiso leso umphakathi uvale umgwaqo.
U-Major Magudulela uthe akukaboshwa muntu kanti amaphoyisa ayaqhubeka nokuphenya.
IKhansela laseMelville, kuWard 24, uMnuz Thokozani Msweli uthe umphakathi ububhikisha ukhala ngezinto ezithinta iqembu le ANC yingakho engenalo igunya lokuphawula.
Okhulumela i-ANC kwisifunda saKwaDukuza, uMnuz Lucky Makhathini uthe umphakathi uqale ukubhikisha emuva kokuthi kube khona umyalezo othi useqokiwe umuntu ozomela le Ward kukhetho lohulumeni basekhaya kuNcwaba (August) kuwona lo nyaka.
Uthe akusilona iqiniso ukuthi useqokiwe umuntu ozomela iqembu kukhetho lohulumeni basekhaya.
Uqhube wathi inombolo ebithumela lo myalezo ongesilona iqiniso ayisasebenzi.
Uthe i-ANC ithumele amathimba ahlukahlukene ezindaweni lapho khona kusuke umsindo ngenxa yokungagculiseki ngezinqubo zenhlangano.
Uthe: “Uma amalungu enhlangano esehlalile phansi nemiphakathi enezikhalo ngezinto ezibandakanya izinqubo zeqembu kuzo bikelwa ubuholi besifunda ukuze kuzotholakala isixazululo,” kusho uMnuz Makhathini.